Halloween bụ ya ụzọ. Mmenyenjo enyi gị na ndị kasị jọgburu onwe ụda mgbe! Mgbe gbanyere mkpọrọgwụ n'obi, gị iPhone-aghọ a window n'ime hell! Ebe a ga-anụ ihe ndị kasị jogburu onwe noises nke ọjọọ. Ndepụta a n'okpuru dere top 10 egwu na spooky-awụ ọsọ n'ugwu dị ka zombie Chịa, ahụhụ ụmụ mmadụ na iti-nkpu, hell ịchị ọchị na ogologo anụ akụ mmiri ígwé. Ị nwere ike ibudata ha na mbubata ha ka ha iTunes mgbe ahụ iPhone na TunesGo na-eji ha dị ka ị chọrọ. Eme ka ụfọdụ egwu mkpọtụ ugbu a!
Mkpa echetara anyị: Jide n'aka na ị pụrụ ịnagide ndị na-esi ma ọ bụrụ na ị na-eji ndị na-esonụ ụdaolu, anọ n'ebe enyi na obi ọrịa ga-wise- buru ibu ọrụ maka gị onwe gị na-eme na dozie a ọnọdụ mgbe ọ dị mkpa.
1. Mọ ke ufọk
Ghostly ịrịba ama na ụlọ anọgidewokwa na-anyụ na weird ihe na-eme.
2. Womans Iti mkpu
A nwaanyị na-eti na iti mkpu dị ka a na-tara ahụhụ si na extremmely na-egbu mgbu nhụsianya.
The screech si hell. Gbalịa na-oyi kpọnwụrụ ka ụmị otu ugboro. Unu ndị enyi ga-hụrụ ya n'anya.
4. Spooky ochi
Egwu ochi si eze ndị hell, a na-egbu egbu onye ị mabu ọma nke.
5. Metal Gara Mad
Ndị mmadụ na-emekarị na-ize ndụ mgbe ha na-ewe iwe. Gịnị mere ma ọ bụrụ na metal nwetara ọhịa ???
6. Panic Otuowo
Agbasa mwute na ndị ọzọ ga ibelata ajọ gị njọ. Olee otú bụ banyere agbasa gị ụjọ na a ìgwè mmadụ ahụ?
Nke ahụ bụ a ụzọ na-amalite Halloween!
7. Dọkịta ezé Mmegide
The dọkịta ezé bụ kwa ike mgbe anyị ezé na-anụ ntị. Ị na-eche dị ka nke a mgbe ị ezé gị wetara?
8. Music Elekere ida
Mgbe niile ọzọ ada ada ị nwere ike mgbe niile-akpọ a elekere arụzi ịhụ ma ọ bụrụ na ha nwere ike inyere aka.
9. Ịgbachi Nkịtị igbu
Olee nnọọ atụ ụjọ!
10. ọbara Anụ
Bụ ihe ndị a na-aga bangbangbang!
Wondershare TunesGo bụ a vasatail iTunes enyi, ime ka ị ijikwa music mfe na gị iPhone na iPad. Na ya, i nwere ike nyefee ụdaolu si iTunes ka iPhone na ala. Download TunesGo mbubata Halloween ụdaolu na iTunes, nyefee ndị a ụdaolu ka iPhone na-esi na spooky ọnọdụ dị nnọọ ka ị na-amasị!
> Resource> iPhone> Top 10 Halloween Ringtones mmenyenjo Enyi Gị